XOG: Maxaa la gudboon Nichlos Haysom,mar haddii laga ceyriiyay Xafiiskiisii Soomaaliya? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: Maxaa la gudboon Nichlos Haysom,mar haddii laga ceyriiyay Xafiiskiisii Soomaaliya?
XOG: Maxaa la gudboon Nichlos Haysom,mar haddii laga ceyriiyay Xafiiskiisii Soomaaliya?
Xoghayaha Guud ee QM, Antonio Guterres waxa uu bishii September 12-dii ee sannadkii hore u soo magacaabay Wakiilkiisa Khaaska ee Somalia, Nicholas Haysan oo ah Diplomaasi u dhashay dalka Koonfur Afrika.
Magacaabistiisa ayaa timid, kadib, markii uu Ergaygii hore ee QM ee Arrimaha Somalia, Michael Keating oo u dhashay Britain ka degay xilkaasi.
Nicholas Haysom ayaana la wareegay xilka Ergayga Khaaska ee QM ee Somalia iyo Madaxa QM ee Hawlgalka Nabad-ilaalinta u jooga Somalia.
Markaynu yara milicsano Taariikh-nololeedka Nicholas Haysom waa 66-jir, Qareen ah oo muddo dheer ku soo jiray Hawlaha Calaamiga ee diiradda lagu saaro Dowlad Dimuqraadi, Dastuurka, Dib-u-habaynta Guddiyadda Doorashadda, Dib-u-heshiisiinta iyo hababka lagu horumariyo Nabadda.
Nicholas Haysom waxa uu Xilal iyo shaqooyin kala duwan ka soo qabtay QM iyo Dowladda Koonfur Afrika.
Muddadii u dhexeysay sannadihi 1999-kii ilaa 2002-dii waxa uu ka mid ahaa Guddigii u xil-saarnaa Wada-xajoodkii Nabadda ee dalka Burundi, wuxuuna ka soo qabtay xilka Guddoomiyaha Guddigii wada-xaajoodka ka galay Arrimaha Dastuurka ee dalkaasi.
Amuurtu si kastaba ha ahaatee, Ergayga QM ee Arrimaha Somalia, Nicholas Haysom waxa uu ku khasban yahay inuu u hoggaansamo Go’aanka Dowladda iyo Sifaha Diplomaasiyadeed ee ay DFS ku asteysay inaan Ergaygaasi yahay shaqsi aan laga jecleyn dalka, lana soo dhaweyn karin “Persona non-grata”. 